people Nepal » आज बुबाको मुख हेर्ने दिन, भाद्र ५ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस् आज बुबाको मुख हेर्ने दिन, भाद्र ५ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस् – people Nepal
आज बुबाको मुख हेर्ने दिन, भाद्र ५ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस्
Posted on August 21, 2017 by Purna Nanda Joshi
आज श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल भाद्र ५ गते सोमबार इश्वी सन २०१७ अगस्त २१ तारीख भाद्र कृष्ण पक्ष औँसी तिथी चन्दमा कर्कट राशिमा १६ः४७ बजे सम्म सूर्य दक्षीणायन बर्षा ऋतु, दर्शश्राद्ध सोमबारेऔँसी, कुशेऔँसी, हलो तथा निशि बार्ने, गोकर्णस्नान , मन्वादि, बुबाको मुखहेर्ने, मोतिजयन्ती
खानपानको कारण स्वास्थमान्य गडबढि रहनसक्छ । सामाजिक कार्यका निम्ती समय ब्यतित रहनेछ । पठनपाठनको क्षेत्रमा मध्यम दिन रहेको छ । बौधिक ब्यक्तिहरुका बिचमा आफु कमजोर भएको महसुस हुनेछ । आफु निर्णय गर्न नसक्ने अनि अरुको भर पर्ने बानिले सामान्य झन्भट आईपर्ला ।
तपाईको मान सम्मानमा सामान्य आघात पुग्नेछ । पारिबारीक मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने योग रहेकोछ । मित्र तथा दाजुभाई बिच सामान्य झोरझमेला ले सताउन सक्नेछ । सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरु लाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुनेछ ।
भोज भतेरमा सरीक हुने अवसर जुट्नेछ । काम कार्यकोक्षेत्र सबल रहला । मित्र तथा दाजु भाई हरुको साथ सहयोगले भाग्योदयको योग रहेकोछ । मन प्रशन्न रहनेछ । कार्य क्षेत्रका सामान्य शकां उपशकांहरुको निबारण हुने दिन रहेको छ । परीश्रमको अनुरुपको राम्रो फल प्राप्त होला ।
शारिरीक आलस्यताले सताउनेछ । रचनात्मक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । खानपानको गडबढिले स्वास्थमा सामान्य असर रहला । सञ्चित रकम खर्चहुने योग रहेको छ । अरुको दबाबको कारण मानशिक समस्या आई पर्ने छन् । ब्यक्तिव बिकाशमा जुट्ने समय रहेको छ
सामान्य खर्चको योग रहेता पनि आटशाहसको बृद्यिहुने योग रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा भने सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । दाम्पत्य शुखमा बाधा पर्न सक्छ । मातृ पक्षमा कसैको स्वास्थमा सामान्य असर रहला । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ ।
आम्दानि क्षेत्र उत्तम रहेता पनि नेत्र सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । सौदर्यका क्षेत्रमा खर्चहुने योग रहेको छ । अनावश्क यात्रा हुन सक्छ । बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । मित्र वा दाजुभाई बिच मनमुटाब हुन सक्छ।
कुलकुटुम्बको साथ सहयोग ले नयाँ कार्यको थालनि हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । आक्समिक धनलाभको सम्भाबना रहेकोछ । टाढाको यात्रा आम्दानि मुलक रहन सक्छ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । आटशाहसमा बृद्यिहुने छ ।
पारीवारीक झोरझमेला ले सताउन सक्नेछ । सामान्य कार्यका निम्ति धेरै समय र परिश्रम खर्चिनु पर्ने छ । तपाईको कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्छन् । अरुले गरेको गलत कामको आरोप तपाईले भोग्नु पर्ला यात्रा झन्झट पुर्ण रहन सक्छ । सभा सम्मेलनमा सहभागीता मिल्नेछ
सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर भएको खण्डमा भने अरुको बिश्वास जितिने छ । काम गर्दा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला सामान्य अप्जस आईपर्न सक्नेछ । मित्रजन हरुको प्रशन्नताका निँित सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । आटँ शाहसमा कमि आउनेछ ।
ब्यापार ब्यवसायमा आफ्नो प्रभुत्व रहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । गरिरहेको कार्य क्षेत्रमा मन चन्चल रहनाले अरु नयाँ काम को थालनि हुन सक्नेछ । परीश्रमको राम्रो फल प्राप्त होला ।
सहयोगी ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले मनमा आघात पुग्नेछ । तपाई सगँ प्रतिस्पर्दा गर्ने ब्यक्तिहरुको बृद्यि हुनेछ । । बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रु सबल रहनेछन् । नयाँ लगानीको क्षेत्रमा बिशेष होस पुर्याउनु होला । सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ ।